Tatoazy tany am-boalohany izay mifangaro ny kubism sy ny sureisme | Famoronana an-tserasera
Nandalo mpanakanto tatoazy isan-karazany manodidina ireo faritra ireo amin'ny fotoana voafetra handao antsika somary gaga amin'ny fombany manokana, rehefa mitranga izany miaraka amin'i Okan Uçkun, mpanakanto tatoazy tiorka manana fomba tsara hitondrana antsika amin'ny karazana famaranana hafa sy endrika ary hevitra tany am-boalohany.
Tsy mora ny mahita mpanakanto tatoazy izay mitambatra Fombanao manokana, zavatra izay aloa ihany koa matetika. Ny mpivady mpanakanto Jade Tomlinson sy Kev James avy amin'ny Expaded Eye dia mitondra rivotra madio sy fomba fijery tsy azo antoka ho an'ity sehatry ny tatoazy ity miaraka amina endriny maro samihafa izay manintona ny saina amin'ny fomban'izy ireo cubist.
Ity mpivady avy any London ity dia mampiasa fifehezana samihafa miala amin'ny zavakanto an-tanàn-dehibe mankamin'ny sary sokitra toa ny tenany, fa ny mampiavaka azy ireo dia ilay fomba tsy manam-paharoa sy tsy mitovy amin'ny endriny manokana amin'ny fampiasana ny lamba olombelona amin'ny asa vaovaon'izy ireo.
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo singa misintona samihafa amin'ny tsipelina miloko sy vitsivitsy pitsopitsony ara-teknika, ny sombiny dia mamorona fomba iray tany am-boalohany hanatonana ny tatoazy.
Ny fitiavany dia ny famoronana sangan'asa izay manana ny "tenany" manokana ary misy ifandraisany amin'ny hevitra sy tantara omen'ny mpanjifany azy. Omena toerana hanovana o koa i Tomlinson sy i James «Mivoatra ara-organika» ny tatoazy manomboka amin'ny inona ny sary eo amin'ny taratasy mandra-pahazavàny amin'ny ranomainty amin'ny hoditra amin'ny farany. Ka noho izany, dia raisin'izy ireo amin'ny sureisme sy cubism izay ilaina mba hahafahana mamaritra ny tatoazy tadiavin'ny mpanjifa, mazava ho azy, miaraka amin'ny fikitika manokana izay mamaritra ny tatoazy ihany.
Afaka mahafantatra ianao ny sisa amin'ny asany avy amin'ny ny tranonkalanao y ny facebook-nao Azonao atao ny mifandray aminy mba hijanonana any Londres ary hanana tatoazy manokana mandritra ny volana vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny kiobanina sy ny tsy azo antoka dia afangaro amin'ireo tatoazy manokana ireo